Iyo nyowani vhezheni yeFirefox 73 inosvika ne NextDNS, yakakura WebRender rutsigiro uye nezvimwe | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yeFirefox 73 inosvika ne NextDNS, yakakura WebRender rutsigiro uye nezvimwe
Iyo itsva vhezheni yeakakurumbira webhu bhurawuza "Firefox 73" yakatoburitswa kare, jPamwe neye mobile vhezheni yeFirefox 68.5 yeAppleUye zvakare, inogadziriswazve yakagadzirwa yeiyo refu-rutsigiro vhezheni "68.5.0".
Mune ino itsva shanduro yebrowser, shanduko dzakasiyana dzinoratidzwa yeayo anouya mashoma eatsva maficha uye kugadzirisa kune aripo iwo, ndizvo zvakaita iyo inclution InoteveraDNS yekutsigira sevhisi yeDNS pamusoro peHTTPS modhi (DoH), neizvi, ikozvino ndinogona kusarudza pakati peNextDNS kana CloudFlare.
Dzimwe shanduko dzinomira muFirefox 73 ndeye kuiswa kwechikamu chekutanga chekukanganiswa kwemapulagi akaiswa kune imwe mhinduro.
Iko shanduko inongoshanda chete kune yekuisirwa kwepulagi mune akagovaniswa madhairekitori inogadziriswa nezviitiko zvese zveFirefox pachirongwa (hapana mushandisi mushandisi) Maitiro akafanana anowanzo shandiswa kuisa-kuisa-ma plug-ins mukugovera, kwekumisikidza zvisina kukumbirwa nevechitatu-bato kunyorera, kusanganisa ma plug-ins, kana kugovera ma plug-ins zvakasiyana neyakaisirwa.
MuFirefox 73, izvi zvinowedzera zvicharamba zvichishanda, asi zvichazotamisirwa kubva kudhairekitori yakagovaniswa kuenda kumunhu maprofiles, ndiko kuti, inozoshandurwa kuita fomati inoshandiswa panguva yekumisikidza kuburikidza neyekuwedzera-pane maneja.
Uyewo, Izvo zvakare zvakasimbiswa kuti kugona kwekumisikidza wepasi rose chiyero chikamu kwakaitwa yakashandiswa kune ese mapeji uye haina kubatana kune ega masayiti. Chiyero chakazara chinogona kushandurwa mumisangano mu "Mutauro uye chitarisiko" chikamu.
Ukuwo, pane masystem ane NVIDIA madhiraivha patent nyowani kupfuura 432 uye skrini resolution iri pasi pane 1920 × 1200, iyo yekuumbwa system WebRender inogoneswa.
Pakutanga, WebRender yaingosanganisirwa iyo NVIDIA GPU nemutyairi weNouveaupamwe neiyo AMD neIntel GPUs. Iyo WebRender yekuumbwa sisitimu yakanyorwa muRust uye inotora mashandiro ekupa peji rezvinhu padivi peGPU.
Yeimwe shanduko dzinojekeswa mukuzivisa:
Wakawedzera rutsigiro rweSVG tsamba yekuparadzanisa zvivakwa uye neshoko nzvimbo nzvimbo.
Yakagadziridzwa mhando yemutowo nekuwedzera kana kudzikisira kumhanya kwekumhanya
Yakagadziridzwa otomatiki kuona kwekare zvinyorwa zvemavara pamapeji asingaratidzi zvakajeka ruzivo rweku encoding.
Yakaderedza mutoro kana uchiunganidza manhamba enetiweki chiitiko chedashboard.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa kushambadza Mune inotevera chinongedzo.
Maitiro ekuisa kana kugadzirisa iyo nyowani vhezheni yeFirefox 73 paLinux?
sudo snap install firefox-73.0.snap
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Iyo itsva vhezheni yeFirefox 73 inosvika ne NextDNS, yakakura WebRender rutsigiro uye nezvimwe
Imwe imwe: South Korea inosiya Windows uye inoshandura kuLinux